रोकिएको कक्षा १० र १२ को परीक्षा हुने मिति ताेकीयाे… – Nepal Insider
अति अन्याय भयो भन्दै , बुरुक्कै उफ्रिदै मिडियामा आएर भने कुलमानको समर्थकले एक सेयर गर्नुहोला (भिडियो सहित)
आफू रहेकै स्थानमा दशैँ, तिहार मनाउन सरकारको आग्रह
मुख्य पृष्ठ /समाचार/रोकिएको कक्षा १० र १२ को परीक्षा हुने मिति ताेकीयाे…
रोकिएको कक्षा १० र १२ को परीक्षा हुने मिति ताेकीयाे…
भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण अवरुद्ध भएको कक्षा १० र १२ को परीक्षा आगामी जुलाई १ देखि हुनेभएको छ । केन्द्रीय माध्यामिक शिक्षा बोर्ड अन्तर्गतको सो परीक्षा आगामी जुलाई १५ सम्ममा सम्पन्न गरिने तय भएको छ । केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत रहेर लिइने केन्द्रीयस्तरको यस परीक्षामा सार्वजनिक तथा निजी दुवैथरी विद्यालयका छात्रछात्राहरुका महत्वपूर्ण मानिने गर्छ ।
“विद्यार्थीहरुको अत्यधिक चासो र चिन्ताको विषय बनेको यस परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ,” केन्द्रीय जनशक्ति मन्त्री रमेश पोख्रियाले शुक्रबार भन्नुभयो । कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिन थालेपछि सरकारले देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेकाले यसअघि परीक्षा हुन सकेको थिएन । भारतमा अहिले पनि देशव्यापी लकडाउन कायमै छ ।
यो पनि दातमा किराले खाएर निकै तनावमा हुनुहुन्छ ? एक रातमै दात खाने किरा चट पार्ने घरेलु उपचार हेर्नुहोस्…
काठमाडौँ । एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा झन्डै ८० प्रतिशत मानिसहरु दातको समस्याबाट ग्रसित छन् । हाम्रो मुख भित्र हुने ७ सय देखी ९ सय प्रकारका ब्याक्टेरिया हुन्छन् । त्यसमध्येको एक हो एक हो ‘स्टेप्टोकोकस ब्याक्टेरिया’ ।
हामीले खाएका पदार्थहरु जब दा“त र गीजाको बीचमा, दाँतको चपाउने भागमा वा दाँतहरुबीचको कापमा दन्तलेउको रुपमा अड्केर बस्छ स्टेप्टोकोकस ब्याक्टेरियाले तत्काल एसिड उत्पादन गर्न थाल्छ ।सो एसिडले बाहिरी तह अर्थात ‘इनामेल’ खिइन थाल्छ । सोही खिएको ठाँउबाट दाँतको भित्रीभागमा छिर्छ । र जति भित्र जान्छ संक्रमण बढाउदै जान्छ ।
दात लाई जोगाउन अनेक प्रयास गरे पनि कहिले काही दात किराले खाने गर्दछ । दातलाई किराले खान बाट रोक्न सर्ब प्रथम सफा गरि रहन पर्दछ । खानपिन पछि दातलाई सफा गरि हाल्नु पर्दछ जसले दातमा टासिएको खाने कुरा नरहोस् ।
बिशेष गरेर गुलिउयो मिठाई खाए पछि दातलाई तुरुन्तै सफा गर्नु पर्दछ । गुलियोमा दात किराले खाने प्रबल सम्भावना हुन्छ । तर यी सबै गर्दै गर्दै पनि दात किराले खायो भने कसरी त्यसबाट छुटकारा पाउने त ! अपनाउहोस यी घरेलु उपाय ….।कसरी अपनाउने घरेलु उपाय
गाई का’टेर भाग लगाउँदै गरेका चारजना पक्राउ
मौसम बिभाग ले दियो ड`रलाग्दो सु`चना :सतर्क बस्नुहोस यी ठाउमा पर्दै छ ज्या`न लिने च`ट्याङ र मुसलधारे पानी